हर्निया भनेको के हो ? यसकाे लक्षण र उपचार जानिराखाैँ - Khabar Nepali
होमपेज / जीवनशैली / हर्निया भनेको के हो ? यसकाे लक्षण र उपचार जानिराखाैँ
यी हुन् हर्नियाका लक्षण :
हर्निया हुन नदिन :
-तौललाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस् । आफूले सोचेको तौलको पाँच किलोभन्दा बढि बढ्न नदिनुहोस् ।
-पौष्टिक खाना खानुहोस् । प्रोटिन डाइट लिनुहोस् ता कि मांशपेसी बलियो होस् ।
-धुम्रपानबाट टाढै रहनुहोस् । यसले खोकी निम्त्याउँछ । लामो समयसम्मको खोकी हर्नियाको कारण बन्न सक्छ ।
-पिसाबसम्बन्धि रोग लाग्न नदिन पर्याप्त पानी पिउनुहोस् ।
-धैरै तौल नउचाल्नुहोस् । जसले अत्यधिक व्यायाम गर्नुहुन्छ उनीहरुले सपोर्ट लिनुहोस् ।
-एकै पटक अत्यधिक र चाँडै चाँडै सिँढी नचढ्नुहोस् ।
-पेटलाई बलियो बनाउने व्यायाम र योग गर्नुहोस् ।
-हामीले केहि सम्बन्धित थप जानकारी दिइएका छाै
-पित्ताशयको थैली शल्यक्रिया गर्नु भएकाे छ भने यस्ताे खानपान गर्नुपर्छ